आर्मीको जर्नेलबाट यसरी तहसनहस बनिन्,–माला |
प्रकाशित मिति :2020-02-26 14:06:10
ललितपुर । मालाले कान्छो छोरा जन्माएको पाँच महिना भएको थियो । जेठो छोरा दुई वर्षका थिए । उनी सुत्केरी नै थिइन् । काठमाडौंको भिमसेनगोलामा सानो फलफूलको पसल थियो । श्रीमान् बाबुलाल साह त्यही पसल चलाउथे । उनी यतायता जाँदा काखमा छोरा बोकेर मालाले नै त्यो पसल हेर्थिन् ।
अपरिचित व्यक्तिको लगातारको आगमन र धम्की सुनेर साह दम्पत्ति निकै डराउछन् । त्यो कुरा मालाका बुबा राजेन्द्र साहसंग भन्ने सल्लाह गर्छन् । मालाले गाउँमा रहेका बुबालाई फोन गर्छिन् । छोरीको कुरा सुनेर चकित भएका राजेन्द्र काठमाडौं पुग्छन् । ती व्यक्तिलाई सम्झाउछन् । रिसाउछन् । प्रहरीलाई खबर गर्ने धम्की दिन्छन् । तर पनि ती व्यक्तिलाई केही लाग्दैन । बरु आफ्नो नाम हेम खत्री भएको र नेपाल आर्मीमा कार्यरत रहेको भन्दै माओवादीको नाममा मारिदिने धम्की दिन्छन् । देशमा सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको थियो । आर्मी, माओवादीको नाम सुनेपछि राजेन्द्रको पनि होसहवास उड्छ । अनि छोरी, ज्वाइँ र नातीहरूलाई आर्शीवाद दिएर राम्ररी बस्नु भन्दै रुँदै गाउँ फर्किन्छन् ।
शनिबार बुबाको विभत्स हत्या बारे सुनेपछि बेहोस् बनेकी मालालाई घटनाको चौथो दिनमा आएर तिनै हेम खत्रीले भने, ‘देखिस् त तेरो बुबाको हालत । खुरुखुरु तेरो हात मलाई सुम्पेर गएको भए यो हालत हुन्थ्यो ?’ उनले बाबुलालले पनि धेरै कुरा गरे ससुराले जस्तै छोराहरूसहित अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ला भन्न थाले । पेस्तोल देखाएर ‘उडाउँ कि जान्छस्’ भने । बाबुलाल ज्यान जोगाउन काप्दै, रुँदै ‘अब म मालाजस्तो श्रीमती कहिल्यै पाउन्न । मेरा छोराहरूको कसरी माया मार्नु’ भन्दै आफ्नो भाग्य धिकार्दै डेराबाट भागे । अहिले उनी छन् कि छैनन् ? कहाँ छन् ? कस्तो अवस्थामा छन् केही थाहा छैन मालालाई ।
मालालाई धेरै दिनसम्म हेमको मायामा विशवास लागेन । आफ्नै जन्दिने बुबालाई विभत्स तरिकाले हत्या गर्ने र निकै माया गर्ने श्रीमान्लाई अलग गरिदिने व्यक्तिलाई चाँडै विश्वास पनि कसरी गर्नु ? तर जबदेखि उनलाई हेमले कब्जामा राखे, त्यही दिनबाट हो मालाले खुल्ला आकाश देख्न छोडेको । उही घरको चारभित्ता, छोराहरू र घरभित्रको काममै उनको दिन रात बित्न थाल्छ । कोठामा अरु कोही न त आउन पाउन, न त कसैसंग कुराकानी गर्ने छुट हुन्छ । एकपटक मालाको नाता पर्ने महिला डेरामा आएपछि हेमले मालालाई धम्काउन थाल्छन्, ‘यो महिलालाई छिटो पठाउछस् कि म कट्टु खोलेर नाङ्गै बस्दिम ?’ उनको यस्तो कुराले माला लज्जित हुन्छिन् । तत्कालै उनलाई बिदाई गर्छिन् ।
हेमले समाज राम्रो छैन । मैले तिमीलाई औधी माया गर्ने भएका कारण अरुसंग उठबस गर्न नदिएको भन्छन् । अरु महिला राम्रा छैनन् भन्दै यदि आफ्नो आदेश भन्दा बाहिर गएर कोहीसंग उठबस् र कुराकानी गरेको थाहा पाए आन्द्रा झिकेर राख्दिन्छु भन्दै साथमै बोकिरहने मसिनो, तिखो फलामको झिरजस्तो बस्तु देखाएर तर्साइरहन्छन् । अरु कोही व्यक्तिको नजिक नभएपछि मालालाई पनि हेमसंग नजिक नहुनुको विकल्प थिएन । उनी हेमका सबै कुरा मान्न बाध्य हुन्छिन् । हेमको नाटकीय प्रेमलाई साँच्चैको प्रेम ठान्न थाछिन् ।
तर अहँ त्यसो रहेनछ । यो २१ वर्षको अवधिमा हेमले मालालाई मायाको नाममा के के मात्रै गरेनन् । घरमा प्रवेश भयो कि झम्टिहाल्थे मालालाई । उनको झम्टाई यस्तो हुन्थ्यो कि छोराहरू पनि लज्जित हुन्थे । दिउसोको समयमा हो भने कोठा छोडेर भाग्थे । राती हुँदा कान थुनेर बस्थे । अप्राकृतिक तरिकाबाट लामो समयसम्म हेम मालामाथि रजाइँ गर्थे । उनी पीडाले चिच्याउथिन् । तर केही सीप चल्थेन । जब हेम शान्त हुन्थे, माला हरेक पटक नयाँ जीवन बाँचेको महसूस गर्थिन् । तर उनलाई हेमले आफूमाथि चरम यौन हिंसा गरेको पत्तै भएन । उनी एउटा श्रीमान्ले श्रीमतीलाई गर्ने माया सोच्थिन् । र हेम जस्तो चाहान्छन्, त्यस्तै भइदिन्थिन् ।
तर आमा छोराहरूको यति विघ्न माया, गुण र सम्मानले पनि हेमलाई भने पगाल्न सकेको रहेनछ । नेपाल आर्मीको उपल्लो तहमै कार्यरत उनले त्यो परिवारका लागि केही गरेनन्,–कहिलेकसो लुगाफाटो किन्नेबाहेक । मालाले नै माइतीको सहयोगमा दुवै छोरालाई ७ कक्षासम्म सरकारी स्कूल पढाइन् । त्यसपछि जेठो छोराले कुकको काम सिके । सानै उमेरमा काम गर्न थाले । त्यसले घर खर्च चल्न थाल्यो । अनि मलेसिया गए । तीन वर्ष काम गरेर फर्किए । फेरि अहिले कुबेत पुगेका छन् । कान्छो छोरा पनि क्रिकेटको कप्तान छन् ।
करिब तीन वर्ष भो । माला कोठामा एक्लै थिइन् । भुइँमा खसेको एउटा कागज भेटिन् । त्यहाँ केही लेखिएको थियो । क नपढेकी उनलाई चाहिने कागज पो हो कि ! भन्ने लाग्यो । पल्लो कोठामा बस्ने व्यक्तिलाई देखाइन् । त्यसमा लेखिएको थियो–सरिता खत्री अर्थात हेमकी श्रीमती । घरको फोन नम्बर पनि । उनले पढेर सुनाएपछि मालाले टेकेको जमिन नै भाँसिएको मससूस गरिन् । बोल्नै सकिनन् । कागज पढ्ने मान्छेले सम्झाए । बरु त्यो नम्बरमा फोन गरेर सोधीखोजी गर्नुपर्छ भने । त्यो नम्बरमा फोन गरे । फोन उठ्यो । फोनमा युवती बोल्छिन् । को हो भन्दा हेम खत्रीको छोरी भनेपछि मालालाई पर्नुसम्म पीर पर्छ । त्यो कुरा छोरालाई सुनाउछिन् । उनीहरू पनि साहै्र चिन्तित हुन्छन् ।
मालाका जेठो छोरा विदेश जाने बेला टीका लगाइदिँदै हेम खत्री ।
दुई वर्ष अघि हेमकी छोरीको बिहे हुने भो । जागिर गइसकेपछि (सहायक रथी पदमा पुगेका बेला हेम खत्रीले पाकिस्तानमा संचालित National Security and War Course (NSWC) तालिममा सहभागी हुन स्नातक तह उत्र्तिण गरेको भनी भारतको मगद्य विश्वविद्यालयको नामको नक्कली मार्कसिट र प्रमाण पत्र पेश गरी सोही आधारमा पाकिस्तानमा संचालित NSWC तालिम गरेको प्रमाणित भएपछि उनलाई सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५५ को खण्ड (घ) को कसुरमा ऐ.ऐनको दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) अनुसार फैसला भएको मिति २०७० कार्तिक २७ गतेबाट लागु हुने गरी भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको थियो । https://www.nepalarmy.mil.np/press-release/511_)घरमा पैंसा नभएको र लाज बचाउने भन्दै हेमले मालासंग पैंसा माग्छन् । पैंसा भएपछि त्यो पैंसा फिर्ता गर्छु भन्छन् । हेमको कुरालाई उनले नाइँ भन्न सकिदनन् । माइतीको पेवा र छोराले कमाएको ८ लाख रुपैंया मालाले हेमलाई दिइन् ।
घटना बारे बुझ्न महिला खबरले हेमको घरको नम्बरमा मंगलबार र आज पटक पटक फोन गर्दा फोन उठ्दैन । उनको मोबाइल नम्बर बन्द छ ।